चलचित्र ‘परदेशी २’ मा हिरो बन्दै गायक प्रकाश सपूत , हिरोईन को हुन् ? – eSidhakura
मुख्य पृष्ठमनोरञ्जन रोचक सिनेमाचलचित्र ‘परदेशी २’ मा हिरो बन्दै गायक प्रकाश सपूत , हिरोईन को हुन् ?
चलचित्र ‘परदेशी २’ मा हिरो बन्दै गायक प्रकाश सपूत , हिरोईन को हुन् ?
काठमान्डौ , २०७२ सालमा प्रदर्शनमा आएको नारायण रायमाझी निर्देशित फिल्म ‘परदेशी’ को सिक्वेलबाट चर्चित लोक गायक प्रकाश सपुतले हिरोको रुपमा डेब्यू गर्ने भएका छन् । ‘बोल माया’ बोलको गीतबाट चर्चामा आएका उनी बाल्यकालदेखि नै हिरो बन्न चाहन्थे । उनी काठमाडौं पनि गायक नभइ हिरो बन्न आएका थिए । अब उनको हिरो बन्ने सपना फिल्म ‘परदेशी २’ बाट पूरा हुने भएको छ । प्राप्त जानकारी अनुसार, निर्देशक रायमाझीले केही दिन अगाडि गायक सपुतसँग फिल्मका लागि कागजी सम्झौता गरिसकेका छन् ।
यद्यपि, निर्माण टिमले फिल्ममा गायक सपुत अभिनेताको रुपमा अनुबन्ध भएको जानकारी भने दिएको छैन।रोजगारीको शिलशिलामा परदेश गएका युवाहरुको कथाव्यथामा निर्माण हुने फिल्मको छायांकन फागुनबाट सुरु हुनेछ ।फिल्ममा गायक सपुतलाई अभिनेताको रुपमा अनुबन्ध गरेपछि निर्देशक नारायण रायमाझी अब अभिनेत्रीको खोजीमा लागेका छन् । ‘परदेशी’ को अघिल्लो श्रृंखलामा गायक तथा अभिनेता प्रशान्त तामाङ प्रमुख भूमिकामा थिए । सिक्वेलमा भने उनलाई गायक सपुतले रिप्लेस गरेका छन् । ‘परदेशी’ भन्दा अगाडि प्रशान्तलाई लिएर निर्देशक रायमाझीले ‘गोर्खा पल्टन’ बनाएका थिए ।
बक्सअफिसमा करीब ७ करोडभन्दा बढीको व्यापार गरेको ‘परदेशी’ को कथावस्तुलाई दर्शकले अत्याधिक रुचाएका थिए । फिल्ममा समावेश गीतसंगीत अझै पनि लोकप्रिय छन् ।फिल्ममा प्रशान्तका अलावा रजनी केसी, नरेन खड्कालगायतको अभिनय थियो। अब ‘परदेशी २’ बाट हिरोको रुपमा डेब्यू गर्न लागेका चर्चित गायक सपुतलाई पर्दामा हेर्न निकै रोचक हुने देखिन्छ ।
भारतमा को’रोनाभाइरस संक्रमणको वृद्धि दरमा ४० प्रतिशतले कमी
१४७८१ पटक पढिएको
७९६४ पटक पढिएको